Ogadentoday Press » Daawo- Madaxweyne Mustafe Omar oo Golle Wasiiro oo Aqoon leh ee DDSI loo dhisay+ Xog-Kooban
OTP- Madaxweynaha Ku meel gaadhka ah Mustafe Maxamed Cumar ayaa maanta Golaha Barlamaanka soo hordhigay Liiska Golle Wasiiro oo 27 ka koobaan kuwaas Aqoon baddan leh. Sida Madaxweynaha sheegay Masuuliyiintan ayaa lagu soo dhisay, Aqoontooda, Deegaanka Iyo Awood qaybsiga Beelaha. Deegaamo baddan ayaa walaac ka muujiiyay sida loo qaybsaday inaysan ahayn caddaalad.
Madaxweynaha Ayaa haddal uu ka jeediyay Goobta sheegay in si ku dhisan taxadar, aqoon, karti, Iyo Sumcada bulshada ku dhex leeyihiin ay ku dhiseen golaha Wasiirada.
Waxyaabaha isoo jiiday waxaa ka mid ahaa hannaanka uu Madaxweynaha Mustafe ka bixiyay Hogaanka Nabad-galyada iyadoo loo eegay dhanka sama-tabixinta bulshadaa qofka la xiro sababta loo xiro uu hogaanku maadaamo haysta shahaado Master ee beeraha naxariista eego isla markaasna qadariyo xuquuda muwaadinta.
Gudoomiyaha Xisbiga ahna Wasiirka Warfaafinta Kililka Axmed Shidane ayaa isagu haddalka soo xidhay isagoo sheegay in habka wax u soo dhiseen ahaa mid qiimo leh isla markaas xubnaha aqoon loo eegay cabashooyin jirana la rabba in hannaankaa geedi socodka lagu saxo. Mudane Shidane ma uusan faafahin cabashooyinka balse waxaa la dareemi karaa inay tahay habka loo qaybiyay Wasiirada wuxuuna haddalka sii raaciyay in Madaxweynaha loo siiyay mandate- sharci innuu saxo hannaanka geedi socodka ha noqoto midka shaqo ama aragti Xisbi